नेपालमा लागू भयो यस्तो नयाँ नियम, भारतलाई ठुलो झट्का लाग्ने निश्चित — Sanchar Kendra
काठमाडौं । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागू भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले म्याद नसार्ने अडान लिएपछि ऐनद्वारा निर्धारित मितिबाटै क्लिन फिड लागू भएको हो ।
टेलिभिजन प्रसारकले प्याकेजमा किन्ने गरेको ९२ च्यानलमध्ये ६० वटा च्यानलले मात्रै अहिले क्लिन फिड च्यानल दिएका छन् । कतिपय च्यानलले तयारी गरेपनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । ‘जी’को १२ वटा र सोनीको ८ वटा च्यानल क्लिन फिडसहित प्रसारण हुँदैछन् । तर, कार्टुनका च्यानल, बीबीसी अलजजिरा, स्टार्स र कलर्स प्याकेजका च्यानलहरु तत्कालै नेपालमा प्रसारण नहुने भएका छन् ।
अब फुटबल, क्रिकेटसहित खेलकुदका च्यानलहरु बन्द भएका छन् । पैसा तिरेर किनिने प्याकज बाहेकका ‘फ्रि टु एयर’मा सित्तैमा उपलब्ध हुने १२० वटा च्यानल पनि बन्द भएका छन् । ‘स्टार्स र कलर्सका क्लिन फिड गर्ने बक्स सिंगापुर र दुबईमा आइपुगेर अड्किएको छ । उनीहरुले कहिलेबाट क्लिन फिड प्रविधि जडान सकाउँछन् भन्ने पक्का भएको छैन ।
प्रत्यक्ष प्रसारणका बेलामा विज्ञापन हुने समय निश्चित नहुने भएकाले क्लिन फिडले खेलकुद च्यानलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि समस्या पर्नसक्ने देखिएको छ । तर, खेलकुद च्यानललाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन भारतीय प्रसारकहरूले दिएका छन् । भारतीय प्रसारकले नेपालमै क्लिन फिड गर्ने भएपछि अब विज्ञापन बज्ने समयमा स्क्रिन खाली देखिनेछ ।
क्लिन फिड भए के हुन्छ ?
क्लिन फिडको अर्थ विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानल हो । अहिलेसम्म विदेशी च्यानलले नेपालको बजारमा निशुल्क विज्ञापन प्रशारण गरिरहेका छन् । क्लिन फिड लागू भएमा उनीहरुले विज्ञापनरहित सामग्री दिनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा कुनै पनि देशमा विदेशी च्यानलहरु दुई मोडलमा प्रशारण हुन्छन् । ‘पे च्यानल’ का रुपमा वा ‘फ्रि टु एयर’ मा । पे च्यानल हो भने त्यसका लागि ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, च्यानलले विज्ञापन बजाउन पाउँदैन । यसैलाई क्लिन फिड भनिन्छ ।
यदि ‘फ्रि टु एयर’ हो भने त्यसमा विज्ञापन बजाउन पाइन्छ । तर, ग्राहकबाट कुनै पनि शुल्क लिइँदैन । नेपालमा भने भारतीय च्यानलहरुले यी दुवै मोडल अपनाएका छैनन् । उनीहरुले एकातर्फ शुल्क पनि लिएका छन्, अर्कोतिर विज्ञापन हेर्न पनि बाध्य पारिरहेका छन् । सीएनएन, बीबीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरु भने क्लिन फिडमा प्रशारण भइरहेका छन् ।
नेपालको विज्ञापन बजार अहिले अनुमानित ६ अर्बको छ । यसको ठूलो हिस्सा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ओगटेका छन् । तर, यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपाली सञ्चारमाध्यमले पाउँदैनन् । उनीहरुले भारतीय टेलिभिजनमा बजाउने विज्ञापनले नै नेपाली बजारलाई सम्वोधन गर्छ, किनकि अधिकांश नेपाली दर्शकले नेपालीभन्दा भारतीय टेलिभिजन ज्यादा हेर्छन् । यस हिसाबले नेपालको विज्ञापन बजारलाई सोझो घाटा भइरहेको छ ।
अहिले नेपाल सरकारलाई वार्षिक ७ लाख तिरेर विदेशी च्यानलहरु नेपालमा प्रशारण हुन्छन् । यही शुल्कबाट भारतीय टेलिभिजन सञ्चालकहरुले अर्बाैंको विज्ञापन देखाइरहेका छन् । क्लिन फिड लागू भएको खण्डमा त्यो बन्द हुन्छ र नेपालको बजारमा २ अर्बको विज्ञापन थपिने आँकलन गरिएको छ । यसबाट विज्ञापन एजेन्सी मात्रै नभएर नेपाली सञ्चारमाध्यमहरु पनि लाभान्वित हुनेछन् ।
विज्ञापनको बजार कुण्ठित हुँदा समस्यामा गुज्रिरहेका मिडियाले त्राण पाउन सक्छन् । अर्कोतर्फ नेपाली कलाकार तथा प्राविधिकहरुले काम पाउनेछन् । नेपाली साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग हुनेछ । विज्ञापनको पनि स्तरवृद्धि हुनेछ ।
यसैसँग जोडिएको अर्को अत्यावश्यक विषय छ । त्यो हो, नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुमा प्रशारण हुने विज्ञापनमा विदेशी अनुहार । अहिले जेजति बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपाली च्यानलमा प्रशारण हुन्छन्, अधिकांशमा भारतीय सेलिब्रेटी (प्राय फिल्मी कलाकार र क्रिकेटर) ले अभिनय गरेका हुन्छन् । ती विज्ञापनहरु नेपालमा बनेका पनि हुँदैनन् । भारतमा भारतीय भाषामै बनेका विज्ञापनलाई नेपालीमा डविङ गरिने मात्र हो । यस्ता विज्ञापन भाषिकरुपमा अशुद्ध पनि हुन्छन् ।
अबको विज्ञापन नीतिले यसलाई सम्वोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा आउने विज्ञापनमा नेपालमा बनेको हुनुपर्ने र नेपाली जनशक्ति प्रयोग गरिएको हुनुपर्ने दुईवटा प्रावधान थपियो भने त्यसले नेपाली कलाकारिता र विज्ञापन बजारको ठूलै कल्याण हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा नै विज्ञापन बनाए भने भारतीय विज्ञापन कम्पनीले लैजाने पैसा नेपाली कम्पनीमा आउँछ । भारतीय सेलिब्रेटीले लिने पारिश्रमिक नेपाली सेलिब्रेटीले पाउँछन् । भलै उनीहरुको भन्दा कम किन नहोस । र, दर्शकले विज्ञापनमा विदेशी कलाकारलाई हेर्नुपर्दैन ।
टेलिभिजनको हकमा मात्र नभएर पत्रपत्रिकाको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । अहिले पत्रिकाहरुमा आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनहरुमा भारतीय सेलिबे्रटीका ठूला–ठूला टाउका छापिएका हुन्छन् । उनीहरुका ठाउँमा नेपाली अनुहार नै प्रयोग भयो भने त्यसबाट नेपाली कलाकारहरुले काम र पैसा मात्र पाउँदैनन्, उनीहरुको स्टारडम पनि बढ्छ ।
नेपालमा विज्ञापन खेलाउन लायक सेलिबे्रटीहरु छैनन् भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । तर, यो सत्य होइन । नेपाली फिल्मभित्र अनमोल केसी, दयाहाङ राई, विपिन कार्की जस्ता स्टारहरुको लोभलाग्दो लोकप्रियता छ । हरिवंश आचार्यदेखि सिताराम कट्टल धुर्मुसम्सम्मका ठूलो फ्यान फलोइङ भएका हास्यकलाकारहरु छन् ।
पारस खड्का, सन्दिप लामिछाने लगायत युवाहरुको ढुकढुकी बनेका क्रिकेटरहरु छन् । अझ पछिल्लो समय त युट्युव र टिकटकले समेत थुप्रै सेलिबे्रटीहरु जन्माइरहेको छ । टिकटकमा एउटै नेपाली युवतीका ५० लाखसम्म फलोअर्स छन् । अरु कस्ता सेलिबे्रटी चाहियो ?
विज्ञापन रोक्ने कि च्यानल ?
‘क्लिन फिड’ एउटा व्यवसायिक विषय मात्र होइन । .व्यवसायिक विषय मात्रै हुँदो हो त यसले आम जनतालाई छुने थिएन । यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय पनि हो ।
टेलिभिजनमार्फत कसरी नेपाली समाजमा विदेशी (मूलतः भारतीय) कला, संस्कृति र भाषाले जरो गाड्दै गइरहेको छ भन्ने हाम्रै आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ । नेपाली भाषालाई हिन्दी भाषाले यसरी थिच्न थालेको छ, आजकाल स–साना बच्चाहरु पनि हिन्दी बुझ्न र बोल्न अभ्यस्त छन् । उनीहरु बाबुलाई ‘पापा’ भन्न सजिलो मान्छन् । उनीहरु नेपाली कलाकार चिन्दैनन्, तर भारतीय कलाकारबारे कण्ठ हुन्छ ।
टेलिभिजनले ल्याएको सांस्कृतिक असरको कुरा गर्दा, भारतीय चाडपर्वहरु नेपाली समाजभित्र जबरजस्त घुसिरहेका छन् । जस्तो– कि, विवाह अगाडि मेहन्दी लगाउने परम्पराकै रुपमा स्थापित हुन थालेको छ, जुन भारतीय सिरियलहरुको देन हो । दिपावलीमा रंगोली बनाउने चलन पनि त्यतैको आयातीत हो । दिपावलीलाई दिवाली भन्न, फागुपर्वलाई होली भन्न पनि भारतीय टेलिभिजनले नै बानी पारेका हुन् । हाम्रो आफ्नै भाइटीका हुँदाहुँदै राखी बान्ने प्रचलनमा नेपालीहरु रमाउन थालेका छन् ।
भारतीय टेलिभिजनबाट आउने सामग्री कस्ता छन् त ? न्यूज च्यानलहरुको कुरा गरौं । भारतीय न्यूज च्यानलहरु समाचारभन्दा पनि अफवाहका स्रोत हुन् । अपुष्ट र हावादारी कुरालाई समाचारका रुपमा सम्प्रेषण गरेर प्रपोगण्डा फैलाउनमा उनीहरु विश्वमै बदनाम छन् । भारतीय सिरियलहरु पनि अधिकांस समाजमा खराब सन्देश सम्प्रेषण गर्नेखालका हुन्छन् ।
यी सबै समस्याहरु क्लीन फिडले हल गर्न सक्दैन । यसको एक मात्र समाधान भनेको निश्चित विधाका भारतीय च्यानलहरुमा रोक लगाउनु नै हो । समाचारका नाममा गलत सूचनाको प्रदुषण फैलाउने र सिरियलका नाममा वालवालिकाहरुलाई बिगार्नेखालका च्यानलहरु बन्द गराइदिनु नै जाति हुन्छ । यसका लागि सरकारसँग अहिले सही मौका छ । खाली साहसिक निर्णयको खाँचो छ ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समय दर्जनौं संख्यामा टीभी च्यानलहरु खुलेका छन् । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरुको कमी छैन । प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी शो नेपाल आइडल, को बन्छ करोडपति एपी वानले प्रशारण गरिरहेको छ । यस्तै हिमालय टेलिभिजनले भ्वाइस अफ नेपाल लगायत चर्चित रियालिटी शोहरु प्रशारण गर्दैछ । कान्तिपुर र इमेज टेलिभिजनले मनोरञ्जनात्मक सामग्री पस्किरहेका छन् । समाचार च्यानलहरु त झन् बग्रेल्ती छन् । अर्थात् दर्शकलाई छनोटको सुविधा प्रशस्त छ ।
यद्यपि, केही कमि पनि छन् । जस्तो बच्चाहरुका लागि कार्टुन वा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको अभाव छ । दोस्रो प्रभावकारी स्पोट्र्स च्यानल छैन । अहिले नेपालीले विदेशी च्यानलमा बढी हेरिने भनेको यिनै दुई विधा हुन् । जब माग सिर्जना हुन्छ, आपूर्ति पनि भई नै हाल्छ । यदि विदेशी च्यानलहरु बन्द भए यस्ता विधातर्फ पनि नेपाली टेलिभिजनहरुले आफ्नो स्तरवृद्धि गर्ने छन् र दर्शकले विदेशी च्यानलको तिर्खा बिर्सनेछन् ।
यदि सरकार क्लिन फिडमा अडिग रह्यो भने यसमा भारतीय संस्थापनले नै प्रत्यक्ष दबाव दिने निश्चित प्राय छ । यो दवावको सामना गर्न सरकारसित दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ नै । केपी ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि क्लिन फिडको नीति लागू गर्न खोजेका थिए । उनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस सम्वन्धी निर्णय लिएको थियो । तर, यसमा भारतले ठूलै दबाव थोपर्‍यो । भारतीय टीभी च्यानलहरुले विज्ञप्ति निकालेर नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्न नसक्ने बताए ।
अहिले पनि दबाव थोपर्न सुरु भइसकेको छ । संसदमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले क्लीन फिड हटाउन संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रष्ट छ, राजपाको काँधमा बन्दुक राखेर गोली हान्न खोजिएको हो । यसबाट पार नलागे भारतले सोझै दबाव दिन सक्छ ।
०७२ सालको नाकाबन्दीका बेलामा केबुल व्यवसायीहरुले नै भारतीय च्यानलहरु बन्द गराउँदा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रहेका कांग्रेस नेताले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ती कांग्रेस नेता अहिले सरकारमा छैनन्, तर छायाँ सरकारमा अवश्य छन् । फेरि पनि उनी र उनीजस्ता कांग्रेसी नेताहरु प्रयोग नहोलान् भन्न सकिँदैन । यस मुद्दामा अहिलेसम्म कांग्रेसका होनाहार भनिने नेताहरुले मुख खोलेका छैनन् ।
अन्य देशहरुमा क्लिन फिडमा प्रशारण गर्ने च्यानलले नेपालमा विज्ञापन बजाउनैपर्छ भन्नु हेपाहा मानसिकता नै हो । भारत आफैंले विदेशी टेलिभिजनमा क्लीन फिड लागू गर्छ, अनि नेपाललाई यो लागू नगर्न दबाव दिन्छ । नेपाललाई दबाव दिन उसले चलाउने अन्तिम अस्त्र भनेको भारतीय च्यानलहरुको प्रशारण रोक्ने हो । तर, त्यो भारतले कदापी गर्नेछैन । भारतीय च्यानलहरु नेपाली बजार गुमाउन कदापि चाहँदैनन् । त्यसैले यदि सरकार अडिग भरह्यो भने उनीहरु नाकको चालले क्लिन फिड लागू गर्न बाध्य हुनेछन् ।
यो कुरा केबुल वितरकहरुले महसुस गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुको भय छ कि क्लिन फिड लागू भएमा या त भारतीय च्यानलहरुले नेपालमा प्रशारण नै बन्द गर्छन् यो महंगो शुल्क माग्छन् । उनीहरु स्पष्ट भए हुन्छ कि भारतीय च्यानलहरु कदापि नेपालको बजार छोड्न असम्भव छ । चेतावनीस्वरुप केही दिनलाई रोके भने पनि दीर्घकालीनरुपमा सक्दैनन् ।
टीभी च्यानलमार्फत नेपालमा कसरी भारतीय भाषा संस्कृतिको प्रबद्र्धन भइरहेको छ भन्ने त्यहाँको सरकारले पनि राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले यदि वितरकहरुले अहिलेको शुल्कमा बढाएर च्यानल नकिन्ने अडान लिनुपर्छ । सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने उपाय यही नै हो ।